AMAKHITSHI AMA-35 ENTOFONTOFO ANEEKHABHATHI EZIMNYAMA (IINGCAMANGO ZOYILO) - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi Amakhitshi ama-35 eNtofontofo aneeKhabhathi eziMnyama (Iingcamango zoyilo)
Amakhitshi ama-35 eNtofontofo aneeKhabhathi eziMnyama (Iingcamango zoyilo)
Le galari ibonisa iikhikhini ezintle zodidi kunye neekhabhathi ezimnyama. Iikhabhathi zasekhitshini ezimnyama ziyamangalisa xa zidityaniswe nezinto zoyilo ezilula ezifana nomgangatho kunye nemiphezulu yeetafile. Ukukhanya kwendalo nangaphakathi kudlala indima enkulu ekugcineni ulungelelwaniso olufanelekileyo phakathi kokukhanya nobumnyama. Apha ngezantsi kukho iindlela zabaqulunqi bangaphakathi abasebenzisa imibala eyahlukeneyo yobunzulu obuqhelekileyo ukusuka kumbala omdaka ukuya kumbala omnyama ukwenza indawo enekhitshi elinomtsalane.
I-Eclecticism yekhitshi kulo mfanekiso ungentla iyabonakala kwisibane sayo esisecaleni lesibane phezu kwebhentshi ejikeleze ikhitshi, kunye neebhalbhu ezininzi ze-teardrop filament. Amalaphu anemigca ethe tyaba nawo aboleka i-quirky edge, kwaye adibanise nomgubo obhulowu weglasi eluhlaza okwesibhakabhaka kunye nezixhobo zentsimbi ezingenasici. Ikhitshi livuthiwe kunye neekhabhathi zaso ezimnyama ezifakwe iiplathi ezimhlophe ezenziwe ngetafile zetyuwa yeAtlantic kunye nomgangatho wendalo.
Nge candelabra yale mihla phezu kwetafile yokutyela nezibane zesilivere eziphindwe kathathu phezu kwebhentshi lasekhitshini, iikhabhathi ezimnyama zekhitshi zigxininisa imvakalelo ye-Contemporary rustic. Iphepheni egreyithi etafileni yokutyela kunye nezihlalo zokutyela ezenziwe ngesikhumba kunye nezitulo zebar ziyaqhubeka zigxininisa ubuNamhlanje, ngelixa ilitye elenziwe ngetayile ekhitshini linika i-rustic vibe.
Isiphatho sesibane esinezibane eziphindwe kabini esinamakristalu axhonyiweyo kongeza ubuhle beGeorgia, njengoko kwenza iikhabhathi ezimnyama ezenziwe ngeplanga kunye needrowa kunye necomputer yentsimbi emnyama, ebanjwe zizibiyeli ezintsonkothileyo zamaplanga. Imarble backsplash exakekileyo enamabala amdaka, ngwevu nangamhlophe ichasaniswa ngumlinganiso wefestile yomfanekiso epeyintiweyo ngomkhusane womthi. Isikwere sethayile esinqunyiweyo esenziwe ngamatye songeza nakwiklasi yesiGeorgia yesi khitshi.
Eli khitshi likhwaza iRustic kunye nokusetyenziswa kweenkuni ezifumanekileyo kwizitulo zebar kunye nenoksi enzima yesidlo sakusasa, kunye nokongezwa kwesikhuseli sebhotile esisiqithi ngaphezulu kwekhitshi lesiqithi, ukubumba izibane ezimbini zentsimbi ezixhonywe kwimizi mveliso. Ukuboleka ezinye izinto zale mihla kuyilo lwekhabhathi yokhuni olumnyama olucekeceke kunye neeshelfu ezivulekileyo ezivulekileyo, kunye nokubuyela umva kombala wegrey nomhlophe. Imigangatho yethayile yelitye lentlabathi ibuyela kwiRustic vibe, kwaye ngokuchaseneyo nomxholo ovulekileyo wokuhlala nendawo yomlilo eludongeni lokugqibela.
Izibane ezijingayo ezingamawele ngaphezulu kwebhentshi lasekhitshini ziphantse zafana nesitayile saseGeorgia kwaye zigxininiswa zizo zonke iikhabhathi ezimnyama ezifakwe iplanga kunye neeleyisi ezifakwe imiphezulu yeetafile zokukhanya zetravertine. Imiqadi yeplanga ebonakalisiweyo eluphahleni kunye nezihlalo ezinzima eziphakanyisiweyo zibolekisa kule nkangeleko yeklasikhi, ngelixa ifanitshala yentsimbi engenasici, umva ongaphantsi kwelitye kunye nomgangatho okhanyayo we-limestone uyinika isibheno sanamhlanje. Iifestile ezicocekileyo ngaphezulu kweekhabhathi ezijingayo zizisa ukukhanya kule khitshi imnyama.
I-architrave eyenziwe ngomthi eguqulweyo ehamba ngepaseji ephambili ikhokelela kwikhitshi enethayile yelitye lekalika, echasene nendawo yomlilo yamatye kwicala elikude ngomgaqo kaloliwe wokhuni. Iikhabhathi zasekhitshini ezimnyama ezenziwe ngamaplanga kunye needrowa zinee-countertops zemarble kunye nezixhobo zentsimbi ezingenasici. Umphezulu wesitovu ugxininiswa ngamatye amancinci amancinci ama-3, kwaye isitya sokuhlambela sinikwa imvakalelo ye-rustic ngesibane segolide esigcwele isibane ngaphezulu kwaso. Ukunyanzeliswa kweklasikhi kwezi zinto kuthelekiswa nophahla lwala maxesha ngaphezulu kwebhentshi lasekhitshini, kunye nemigca yalo ecocekileyo kunye nokukhanya okukhanyisiweyo.
I-backsplash enezinto ezincinci zemibala eyahlukeneyo yamatye endalo ajongeka exakekile kunye notshintsho, kodwa ithontsiwe ngokugqibeleleyo ziikhabhathi ezimnyama zamaplanga kunye needrowa, ezixutywe nesinyithi sewayini engenasinxi, ifriji, imicrowave kunye nestovetop kunye noluhlu olugudileyo olugqwesileyo ngokugqibeleleyo . Ikhawuntala yekhitshi ime kakuhle nomzimba wayo opholileyo omhlophe kunye nesitripthi samatye esiluthuthu esihambelana nesitya sokuhlambela esingatyiwa. Umgangatho owenziwe ngamatye wethayile okrwada wongeze kwiitoni ezipholileyo zekhitshi kwaye uthelekiswa nomgangatho wombhoxo wetafile yokutya. Izibane ezi-pendant ezibini ngaphezulu kwe-countertop zibopha ngokupheleleyo ukujonga kunye.
Ukulula kulula ngapha kweli khitshi, apho iikhabhathi ezimnyama zeprofayili ezimnyama zihambelana neetafile ezimhlophe ezimhlophe kunye nezibambo zesilivere ezinomda. Izixhobo zentsimbi ezingenasici ezifana ne-Ref, i-oveni, isitovu kunye noluhlu lweebhonethi zijongeka zingenamthungo, zigungxulelwe phantsi kwi-casework. Itheyibhile yelitye eline-linear-backsplash yongeza kwi-Contemporary imvakalelo epholileyo yale khitshi. Iikhitshi ezineekhabhathi ezimnyama zihlala zibhangqiwe ngee-countertops ezimhlophe ukunika umahluko othandekayo othandwa ngabanini bamakhaya.
wenza ntoni ms. kuthetha
Uphahla olungagqitywanga lwekhonkrithi luyindibaniselwano efanelekileyo kweli khitshi limnyama kwiidrowa ezinkulu zomthi omnyama, kunye nekhabhathi yekhephu eqingqiweyo yealuminium enefreyimu, edibanisa imveliso kunye ne-luxe. Ityala elimnyama elenziwe ngomthi lifakelwe imiphezulu yeetafile zemabhile ezimnyama ze-emperador, kwaye zityhutyhile kwizixhobo zentsimbi yanamhlanje. Ifestile enkulu yemifanekiso ekhokelela kwi-balcony, eneendonga nakwikhonkrithi engagqitywanga kwaye ejonge isibhakabhaka iboleka kwimizi-mveliso.
Umbala okhanyayo we-backsplash unokunceda ukukhanyisa iikhikhini ngeekhabhathi ezimnyama. Iikhabhathi ezimnyama ezinee-countertops ezimnyama zeemabhile ezimnyama zifaniswa ne-backsplash kwimigca emincinci yemabhile emhlophe emhlophe emhlophe kunye nezimvi ezixutywe ngombala omdaka kunye neorenji. Iikhabhathi zeglasi eziqingqiweyo kwizakhelo zealuminium zibonelela ngesiqabu kwimibala exakekileyo kunye nokuthungwa kwelitye kunye neenkuni, njengoko kunjalo ngentsimbi engenasici istovu segesi esitovu kunye noluhlu lwendawo.
Umxube onomdla wemibala kwitafile yegranite uyagxininisa kwisithsaba se-rustic brown noses kunye ne-walnut emnyama plinth kunye neekhabhathi, kunye neengcango zefriji ezilandela ukugqitywa komthi wendalo. Ukugqitywa kwesinyithi kwentsimbi phantsi kwesi siqithi sekhitshi kunika uluvo lwefektri ngeli khitshi, njengoko kunjalo ngebala elimnyama elingaphezulu kwezishelufu. Imigca ecocekileyo yebhasikiti yokuluka umva kunye nezinto zesilivere ezihonjisiweyo zilungelelanisa le khitshi yesitayile seshishini.
Ixabiso elilinganayo lomgangatho omnyama weplanga ohamba usuka kwigumbi lokutyela uye ekhitshini elayishwe kabini okanye egali igxininiswa kukuwa kwayo kunye neekholamu ezigqunywe ngamatye. Ikhitshi ngokwalo lifakelwe iikhabhathi zomthi ezimnyama ezingenanto ngaphandle kwezinto zokubamba izixhobo zentsimbi kunye neetafile zentsimbi ezingenazingcingo kunye nezixhobo. Isibuko kunye nesibane selambu kwicala longeza ubumnandi kwimigca emnyama, ecocekileyo yekhitshi.
Ilanga elijikelezayo lisikiwe kwaye isilingi egobileyo egobileyo ngezibane eziluhlaza okwesibhakabhaka ibolekisa imvakalelo ye-Futuristic kweli khitshi nakwigumbi lokutyela. Ngeefestile zemifanekiso emi-2 emikhulu ejongene neentaba ngaphandle, ngaphandle kungeniswa nekhitshi emnyama iikhabhathi zeenkozo zeenkozo kunye neecaseworks kunye neplanite yentsimbi emnyama. Imigangatho ikwangqinelana nentaba kunye nokukhanya kwayo kwetreyini yokuhamba kwetreyini, njengoko kusenziwa umva ngendlela eyahlukileyo yokusika okuncinci kwamatye angwevu namhlophe.
Izibane ze-Lancet ezimnyama ezimile okomnyama ngaphezulu komdlalo weplanethi wegranite omnyama odibeneyo kunye neekhabhathi ezifudumeleyo ezenziwe ngomthi kunye nezixhobo zombane zealuminiyam ezimnyama eziyekwe kwi-casework. Iithayile zomgangatho wamatye ezinqunqwe ngokungacwangciswanga ziboleka umoya wokuhlala kwikhabhathi yokuhlala, ngelixa isipili esikhulu esigxininiswe ngamathathu amancinci amancinci enza ukuba eli khitshi libe yindawo yokusebenza yangoku.
Ukukhanya kweglasi yesidlo sakusasa esenziwe ngeglasi kuthelekiswa nezibane ezincinane ezimile okwe khonji phezu kwayo, xa kuthelekiswa nesiqithi sekhitshi esiqhotyoshelweyo, esenziwe ngetafile yemabhile emvi kunye nekhabhathi enkulu engwevu. Izinto zemarmore ezimhlophe kunye nezimvi ezingwevu ziyangqinwa kwiikhabhathi ezingqonge ngaphezulu kunye ne-backsplash, emisela ifestile enkulu yemifanekiso equlunqa iintaba. I-backsplash ehlukeneyo yamatye emva kwe-hood ye-range yongeza umbala wombala kule khitshi yeklasi yangoku.
Iikhabhathi zepaneli zamaplanga kunye neetrawers zinee-countertops ezinkulu ezimhlophe kunye neorenji. Iinkuni kunye neentsimbi zentsimbi, udonga oluphahliweyo kunye nomgangatho onzima we-Mazama wokhuni olongezelelekileyo longeza kwimizi-mveliso yeli khitshi. Kwelinye icala, izixhobo zensimbi ezingenasinxibo, umhlana omhlophe ongwevu nomhlophe kunye nesibane sesibane sesibane esinika eli khitshi lemiziba imigca ecocekileyo, elula.
Iithayile zamatye amnyama kwipateni ye-chevron zibonelela ngesiseko kule khitshi, ngombono wangaphandle ngokusebenzisa iingcango zayo zesiFrentshi zala maxesha. Imiphezulu yeetafile zemabhile zeCalacatta zibonisa ukukhanya okumhlophe phezu kwesiqithi esinzima esimnyama sase khitshini, ngelixa iikhabhathi ezingaphantsi kunye neekhabhathi ezixhonyiweyo zigqityiwe ngomthi omnyama we-grainier. Imibala emnyama kweli gumbi yahlukile ngophahla olumhlophe olungaphezulu kolukhitshi kunye nomgaqo omhlophe wethayile yangaphantsi.
Izibane ezibini ezisongekileyo zeglasi zixhonywe phezu kwetafile emhlophe yeArtartz emhlophe esekhitshini emnyama eyenziwe ngamaplanga, igqityiwe ngezihlalo ezibini ezimhlophe ezimnyama ezenziwe ngombala omnyama. Elinye ikhitshi likwafakelwe ngamaplanga amnyama afakwe iiplanga zokuhombisa kunye neekhabhathi ezijingayo, kunye nezinto zombane ezingenazintsimbi. Ukukhanya kuziswa kwindawo eneefestile zokucoca ngaphezulu kweekhabhathi ezixhonyiweyo, ezingqinelwe yitreyini encinci yegrey.
Iithayile zelitye lendalo ezinokulinganisa okuziinkozo okulinganayo kunye neekhabhathi zeplanethi ezimnyama ezihonjiswe ngetafile emhlophe eqinileyo. Izixhobo zensimbi ezingenasici zigqityiwe kungeniswa emxholweni, kwaye zixhaswe ngumfanekiso wethayile kaMosisi kumabhanti amhlophe namabala amhlophe kunye nomnyama oqinileyo. Isitshisi seoyile esenziwe ngeoyile ngaphezulu kwetafile yokutyela eneempawu zokutyala eziluhlaza zigqiba ukubonakala kwale khitshi yakudala yesiqhelo.
Izibane ezintathu zekristale ezijingayo zixhonywe phezu kwentsasa yesidlo sakusasa, ezenziwe ngesiseko somthi esimnyama esimnyama kunye nomphambili wamatye oqinileyo omnyama. I-chandelier yekristale ngaphezulu kwesiqithi sasekhitshini ifana nezibane ezijingayo ngelixa isitrato esimhlophe esimenyezelweyo seCarrara sithelekisa emnyama yentsasa yesidlo sakusasa. Iifestile ezimnyama ezenziwe ngombala omnyama kunye nesilingi emhlophe ebolekayo ibolekisa umda ocacileyo kwimigca yaseGeorgia yezibane kunye neekhabhathi ezixhonywe ngamaplanga, njengoko kwenza izixhobo zensimbi ezingenasici kunye nokubuyela umva kwemayile yombala ongwevu.
Umbhoxo oneenwele ezinde onezitya zokuhlambela unikezela ngotshintsho kubume bomgangatho oqinileyo weplanga ohambelana neekhabhathi zomthi ezenziwe ngamaplanga ezimnyama kunye nomsebenzi wecala. Epakishwe ngesitayile esimnyama esimnyama samabala amdaka aphekiweyo, le khitshi iya kujongeka ngakumbi kwisikolo esidala, kwaye igxininiswa yikalika yekristale ekhazimlayo eneeeroseti zesikwere.
I-Gatsby-esque line line yegolide kunye nesibhakabhaka esibhakabhakeni phezu kwebhentshi yekhitshi sinika i-Old Hollywood ubuhle kule khitshi. Iikhabhathi ezimnyama ezenziwe ngamaplanga, ngakumbi ukubiyelwa ngamaplanga ngaphezulu kwesitovu esixhonyiweyo kunika umahluko omnyama kwisiqithi sekhitshi esimhlophe esimhlophe esine-countertop yamatye amhlophe, kunye nomgaqo omhlophe wethayile yangaphantsi komgaqo ohamba emva kwesitovu. I-marble e-tile egqityiweyo efakwe kwiikona ezimile okwe dayimani yongeza kubuhle obuDala baseHollywood, njengoko kusenziwa nesibane sesibane seorenji ngaphezulu kwetafile yokutyela.
Ngombono wayo ovulekileyo, umbala oluhlaza okwesibhakabhaka esofeni sisincoko esiqaqambileyo kwiitoni ezithobileyo zekhitshi, kwaye idityaniswe kunye nomgangatho oshushu, weplanga yomthi. Iikhabhathi ezimnyama ezenziwe ngomthi, kunye ne-casework zidityaniswa ngaphandle komthungo kunye nezixhobo zentsimbi ezigqityiweyo ezingenanto kwaye zine-countertop emhlophe emhlophe. Umgca we-beige tile backsplash osebenza kuyo yonke into eludongeni lwangasemva uphazanyiswa kukumiswa nkqo kwemigca emhlophe engwevu ngaphezulu kwesitovu phezulu kunye noluhlu lwehood, kutsala umdla kule ndawo.
Iidreyini ezimnyama ezingaphantsi kwamaplanga kunye neekhabhathi ezixhonyiweyo zihambelana neendonga ezimhlophe kunye neefestile ezimhlophe ezimnyama ezijonge egadini. Imiphezulu yeetafile igqityiwe ngamatye e-beige akhazimlisiweyo, kwaye isiqithi sasekhitshini sinika umahluko kwisiphelo saso esigobileyo kunye nomthi omhlophe womthi. Iplanga efudumeleyo yeplanga yongeza kwimfudumalo yale khitshi enemilo engu-L, ngelixa iifestile ezicociweyo ngaphezulu kweekhabhathi kunye negrey kunye nomhlophe ithayile yokubuyela umva kwongeze ekukhanyeni nakulungelelwaniso lwendawo.
I-kay jewelers zemitshato yomtshato wedayimani
Izibane zesikwere zala maxesha kwizitrone zixhonywe kwimiqadi eyenziwe ngeplanga enika ikhitshi ugcino lwangoku. Ukukhethwa kweenkuni okukhanyayo kwiikhabhathi kunye nomsebenzi wezinto ezenziwayo zibonelela ngesithambiso sokukhanya kwizithambiso zemabhile ezimhlophe ezingwevu, kunye neslab phezu kwentsasa yesidlo sakusasa esenza igophe lenyanga elinesiqingatha esincinci. Ifestile yomfanekiso etyhidiweyo phezu kwesitya sokuhlambela yongeza kumtshato wemihla ngemihla kunye nezinto zeBarn, njengoko kunjalo ngeglasi enekhephu ejingayo iikhabhathi ezifakwe kumthi oshushu wokhuni.
Imiphezulu yeetafile ezimnyama nezimhlophe zegranite kunye namacwecwe amatye e-Calacatta zizinto ezixakekileyo eziza kusebenza nazo, kodwa iikhabhathi ezimnyama ezigudileyo kunye nezixhobo zensimbi ezingenasici kunye nezibane ezijingayo zibonelela ngendlela efanelekileyo kwezi zinto zigqityiweyo. Iwindow enkulu yemifanekiso ngaphezulu kwesitya sokuhlambela yenziwe ngealuminiyam emnyama kunye nemigca yayo ecocekileyo eyahlukileyo kugqityiwe kugqityiwe okusetyenziselwa i-flooring kunye ne-countertop.
Isipili segolide esintsonkothileyo sinikezela ngendawo egxila kuyo egumbini, ijinga ngaphezulu kwesiqithi sasekhitshini, isileyiti esimhlophe samatye e-quartz endalo akhanyisiweyo anikezela ukukhanya kunye neentsika zawo zomthi kuwo omane amacala. Iikhabhathi ezimnyama zekhitshi ezimnyama ezifakwe kwi-matte sheen zigqamisa indawo ephambili kwaye ziboshwe ngezinto zensimbi ezingenasici kunye nomhlana omhlophe kunye noboya obuyimbumba. Iithayile zomgangatho we-travertine zomgangatho obaleka zijikeleza yonke ikhitshi kumgangatho wokubopha ukujonga konke kunye, ukudala imigca ecocekileyo yanamhlanje kwindlela yaseGeorgia yekhandlela kunye nekhabhathi.
I-backsplash eqanduselwe umnqamlezo phezu kweetafile zamatye ezigcotyiweyo zase-Italiya zinikwa i-Futuristic vibe ngokukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka okufihliweyo phantsi kwepelmet yekhabhathi ejingayo. Ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka kuyaqhubeka ngaphezulu kweengcango zekhabinethi ezimnyama ezenziwe ngamaplanga kwaye kuyangqinwa yindawo engwevu ephakanyisiweyo yitulo ebhentshini lasekhitshini. Izixhobo zensimbi ezingenasici zigxininisa lo mxholo wexesha elizayo, ngelixa iithayile zomgama ezihamba phambili zibonelela ngendalo.
Iingcingo zensimbi zifake izibane ze-filament okanye i-Edison bulbs zongeza i-rustic vibe kwikhikhi enye yanamhlanje. Ingqolowa yeenkuni ezingwevu yeekhabhathi kunye neekesi, kunye nomgangatho wokhuni kunye nomthi ongwevu kunye nezihlalo ezimnyama zentsimbi zongeza kwi-rustic vibe, ngelixa umnyama ongwevu umva umva, izixhobo zombane zeViking zentsimbi, kunye nomgangatho ukuya eluphahleni ucango olutyibilikayo kwi-balcony yongeza i-vibe yanamhlanje.
Isiphatho sesibane esinezibane ezibini kunye namakristalu axhonyiweyo kongeza ubuhle baseGeorgia, njengoko kwenza iikhabhathi ezimnyama ezenziwe ngeplanga kunye needrowa kunye neetafile zemarble ezimnyama ezimnyama, ezigcinwe zizibiyeli zomthi ezintsonkothileyo. Imarble backsplash exakekileyo enamabala amdaka, ngwevu nangamhlophe ichasaniswa ngumlinganiso wefestile yomfanekiso epeyintiweyo ngomkhusane womthi. Isikwere sethayile esinqunyiweyo esenziwe ngamatye songeza nakwiklasi yesiGeorgia yesi khitshi.
Iikhabhathi ezimnyama zamatye ezenziwe ngeplanga kunye neetreyini ezibhangqwe ngezibambo zesilivere ezinomgca zinika eli khitshi i-Contemporary vibe, ecaleni kwento yayo engenazintsimbi engena ngaphakathi kwi-casework nakwisilivere yentsimbi kunye nakwizitena ezimnyama. Iglasi kunye neglasi emhlophe yeglasi yethayile yokubuyela umva kunye negrey ephothiweyo yamanqwanqwa amatye afaka iindidi kwiimpawu zomgangatho wendawo. Iitreyini zethayile yokudibanisa iitreyini kunye kunye nokujonga okumnyama nokumhlophe kunye neetoni zayo ezingathathi cala.
Iisilingi ezimhlophe ezifakwe ebhokisini zinikwa ubomi ngamaplanga afudumeleyo kwimimandla efihliweyo, kwaye ziyathelekiswa nesibane se-Futuristic sculptural aluminium esisisibane sependant etafileni yokutyela. Izitulo zetafile zokutyela ezimnyama ziphakanyisiwe kwizitulo ezinde ezinde, ezibhityileyo, ezijamelana nebhentshi yenqanaba eliphindwe kabini lomthi omnyama ocoliweyo omnyama ogcwele imiphezulu yeetafile emhlophe ecocekileyo. Ukukhanya okuninzi kuziswa kwindawo eneefestile ezinkulu zemifanekiso kunye nesibhakabhaka ngaphaya kwendlela esekhitshini esecaleni. I-backsplash yelitye eline-linear eguqulweyo kunye neethayile zomgangatho we-travertine zigqiba ukubonakala kwale khitshi yanamhlanje.
Eli khitshi likhwaza iRustic kunye nelitye elingafakwanga lomlambo eligqityiweyo eludongeni lwangasemva. Ukongeza kumtsalane wayo we-rustic ziikhabhathi ezikwinkozo emnyama yomthi enemigca enzulu, imiqadi eveziweyo eqengqelekayo esilingini, kunye nepaneli yentsimbi enomhlwa eneeriveti ngaphezulu kwebala lekhitshi, exhaswa ngumgaqo kaloliwe weplati kunye nezibiyeli zekona. I-candelabra yentsimbi eyenziwe yaxhonywa phezu kwesiqithi sase khitshini kunye ne-countertop yayo yamatye ebomvu egcinwe ngumthi oqinileyo kunye nekholamu. Imigangatho yeplanga yomthi ikwisithunzi esikhanyayo, ivumela ezinye izinto ezimnyama ukuba zime kwindawo yesehlo.
I-candelabra yentsimbi eyenziwe ngegrey kunye negrey ehlanjwe ngamaplanga ekhabhinethi iboleka eli khitshi i-Southern Gothic vibe. Olu hlobo lugxininiswa ngakumbi yintsimbi eyenziwe ngefestile kunye nesithsaba sokubumba ngaphezulu kwesitovu sensimbi esingenasici kunye noluhlu lwendawo. Imiphezulu yeetafile yamatye ebengezelelweyo kunye nebhasikiti engwevu yokuluka i-backsplash ekhanyiswe ngezibane zepelmet zongeza ii-accents ezinemigca; ngelixa i-grey eguqulweyo yamatye egangathiweyo egqityiweyo igcwalisa eli khitshi ukubukeka kweContemporary Gothic.
Iikhitshi ezineekhabhathi ezimnyama zinokubonakala zincinci ngaphandle kokuba kuthelekiswa nemiphezulu yeetafile ekhanyayo, isilingi, ukukhanya okanye ukutyibilika. Eli khitshi linceda ekukhanyeni kwendalo okuninzi okudityaniswe nophahla olumhlophe olupeyintiweyo ukunika eli gumbi imvakalelo yokukhanya. Ikhabhathi emnyama ifaniswe nekhawuntari emnyama yamatye esepha kwesi siqithi kwaye ine countertop yebhloko yomthi kwicala ngalinye lomgangatho ophakamileyo. I-backsplash encinci yezitena idityaniswe ne-stainless steel splashboard emva kwendawo yokupheka enika imveliso ye-vibe.
Imiphezulu yeetafile zegranite ezimenyezelelweyo ezimnyama ziyahambelana neekhabhathi ezimnyama ezenziwe ngamaplanga kunye needrowa; Ngelixa izixhobo zentsimbi ezingenasici kunye nesitya sokuhlambela, kunye nezibane zeglasi ngaphezulu kwesiqithi sasekhitshini zibonelela ngokugqitywa kweContemporary kumdibaniso weenkuni kunye negranite. I-backsplash emhlophe emhlophe eqaqambileyo ibonelela ngokukhanya ekhitshini elimnyama kakhulu, kwaye icinezelwe kukukhanyisa kwe-cove phantsi kweekhabhathi ezijingayo.
Iikhitshi ezineekhabhathi ezimnyama ezalungiswa ziindonga ezimhlophe kunye nomgangatho okhanyayo unokunceda ukugcina ibhalansi egumbini. Kwigumbi elingaphezulu kombala wokukhanya ocacileyo weethayile zelitye ezikhokelela kwigumbi lokutyela ukuya ekhitshini. Iikhabhathi ezimnyama ezijingayo zinee-aksenti ezinje ngezityalo kunye namatyala amhlophe, kwaye zifihle ukukhanya kwepelmet, zikhanyisa imiphezulu yeetafile zemabhile ezimnyama kunye nomqolo wamatye amhlophe.
Isiqithi sasekhitshini siyazahlula kwezinye izinto zekhitshi ezinesiseko esimhlophe somthi, umphambili ongwewe ongwevu kunye ne-curvilinear cut countertop slab. I-White Cattleya orchids zibonelela ngetafile efanelekileyo yokutyela phantsi kwesibane sephepha lesibane sephepha. Izixhobo zentsimbi ezingenasici kunye nesitya sokuhlambela sigxininisa ngakumbi ukutshintsha okwenziwe kule ndawo yasekhitshini.
Amakhitshi eNtofontofo - Iikhitshi eziMnyama eziMnyama - Uyilo lweKhitshi Iingcamango - Iziqithi zeKhitshi ezinokuhlala - Iingcamango ezingama-77 zeSiqithi seKhitshi
Utata intombi uyadanisa emitshatweni
imibono ephantsi ephantsi
ndikuthanda kakhulu lyrics 80s
Uhlobo lweSpanish ekhitshini
bendihlala ndithandana nawe
ilokhwe yomtshakazi yobukhulu bonke